Inguqulo 0.8.2 – 3 kweminyaka, 66 izilimi, 1 wordpress
March 6, 2012 by okunikezwayo 21 Amazwana
Ngathi 3 amakhandlela ngalolo ikhekhe!
Sekuphele iminyaka emithathu (kanye kwezinsuku ezintathu, kanye namahora amathathu amathathu) selokhu version yokuqala ye Transposh plugin iye yabizwa senza ngale wordpress.org plugin Igumbi.
Ngokuqinisekile Isikhathi sihamba.
Lokhu bekulokhu onyakeni eqa wokuqala (29Th February) kanye real eqa ngonyaka Transposh. I-plugin liye ilandelwe kusukela Igumbi phezu 50,000 Izikhathi kulo nyaka futhi uye wenza ukukhula okuqhubekayo izici kanye inani izilimi asekelwa. Futhi namhlanje ne ukwengeza Hmong Daw thina yiwona plugin wokuqala ukusekela inombolo leliphelele 66 izilimi.
Lokhu kwaba a esemqoka (njengasezulwini, bephila ezithakazelisayo) Unyaka for the othomathikhi labahumushi ezimbonini kanye plugin, lapho Google icishe yasiyekela ukwesekwa API (kuphela ukushintshela umfuziselo pay) kuyilapho Bing okubekwe kwemingcele ezintsha. Transposh uye waphumelela wanqoba lezo zinguquko, kuyilapho nezinye plugin zazifile.
Kusho ikusasa ithemba Transposh? Sekuzol abilayo Izinto ezintsha ezinye, ukusebenza kwi umbono ukuze sithuthukise website translation, lapho izinto izobe – bayakuba out. Khonamanjalo, Ukwesekwa yakho waqhubeka kubalulekile kithi, ngezinye izikhathi imeyili elula nge “plugin yakho mkhulu” ushayela ukuba uqhubeke. Ngakho uma ukholelwa senza kahle, uphonsa us umugqa, uma ucabanga ukuthi kumele sithuthukise izinto, uphonsa us inothi, futhi uma ucabanga ukuthi thina ncela, we fail to understand why you have read this message up to this point 😉
Abafisa ngokwethu ngonyaka omkhulu 4th, maybe it will end with a bigger cake 🙂
Lalihlezi Ngaphansi: Imilayezo jikelele, Izimemezelo ukukhululwa, Izibuyekezo Software Umake With: bing (MSN) umhumushi, usuku lokuzalwa, minor, izilimi ezingaphezu, ukukhululwa, plugin wordpress
Inguqulo 0.7.2 – Eyesithathu Siyeza
March 1, 2011 by okunikezwayo 11 Amazwana
Happy birthday yesibili ye-plugin
Siye nje kudedelwa version 0.7.2 nge ezimbalwa bug fixes and izinguqulo ezintathu eyandisa plugin.
Ukuhumusha Italian by Marco Rossi
Ukuhumusha wasePheresiya by Sushyant Zavarzadeh
Ukuhumusha Spanish by Angel Torregrosa
Eminyakeni emibili (kanye usuku) Sekudlule version 0.0.1 wadedelwa kanye nonyaka owodwa kusukela version 0.4.3 wadedelwa. Kulo nyaka sasiba phezu 32,000 okulandwayo uma eqhathaniswa 13,000 ngonyaka ngaphambi, futhi sinazo izimpawu futhi kancane more esekhulile umkhiqizo.
Besifuna ukugubha lolu suku ngokukhulula inkonzo proxy, kodwa ngeshwa lokhu kuyokwenziwa imisiwe kancane, Nokho – the 24GB ram server ozinikezele ekugcineni up (elinomphakathi le ndawo) futhi thina maduze sikulungele ukuba Rumble. Uma bebheka phambili imibono yakho, iziphakamiso, Amazwi anomusa nanoma yini ongase uthande baphonse at kithi.
Lalihlezi Ngaphansi: Imilayezo jikelele Umake With: usuku lokuzalwa, minor, ukukhululwa, plugin wordpress
Inguqulo 0.4.3 – Wordpress plugin yokugubha usuku lwethu
February 28, 2010 by okunikezwayo 2 Amazwana
Omunye unyaka 13,000 okulandwayo kamuva, siyajabula ukukhipha version 0.4.3.
Le nguqulo kuletha in ukuhambisana olwengeziwe nge ezinye izindikimba kanye ekuvezweni angcono $ futhi % izimpawu.
Noma ubani ofuna ukuba ukuqagela inani okulandwayo siyoba ngonyaka ozayo?
Lalihlezi Ngaphansi: Izimemezelo ukukhululwa Umake With: usuku lokuzalwa, minor, ukukhululwa, plugin wordpress